Tokin'aina ny marina atao - Takila Malagasy
Tokin'aina ny marina atao (Angano)
Nitsidika : 1042
Nisy, hono, vehivavy anankiray sy ny zanany izay reradreraka tamin'ny fivelomana, ka nanihika no mba nataony filana. Nefa na dia nahantra fadiranovana aza izy, dia nofadiny mihitsy ny halatra.
Indray andro dia sendra nanihika tany an-keniheny izy mianaka ka tratra hariva tany. Dia nitomany te hody ny zanany ka nanao hoe : " Matahotra aho, ry ineny, fa alina ity ny andro, sady mangingina loatra isika mianaka aty an-keniheny ! " Fa nanome toky azy reniny ka nanao hoe : " Aza matahotra foana, ry sombinaiko, fa ny olo-marina tsy mba matimaty foana tsy akory."
Kanjo tamin' izay sendra tamy kosa ireto olon-dratsy roa lahy : ny iray mpamono olona, ny iray mpamosavy. Nivadi-po tery ilay zazavavy nony nahita azy ka nanao hoe : " 'Ndeha handositra, ry ineny fandrao dia vonoin' ireo eto isika mianaka ! " Nefa tsy nanaiky reniny, fa namaly hoe : " Aza matahotra anaka, fa ny marina tsy mba matimaty foana tsy akory."
Rehefa tonga teo amin' ireo jiolahy, dia tsy sahy namono azy mianaka tsy akory, satria vehivavy izy sady tsy nihaingo loatra, fa izao no resadresaka nataony : "'Ndeha hoentintsika hamidy ireto, ka hozaraintsika ny vola vidiny." Dia nentiny tany anaty ala izy mianaka, fa nisy lava-bato fieren' ny jiolahy tany.
Nony tonga tany izy, dia lasa ilay jiolahy nitady olona hividy azy mianaka, fa ilay mpamosavy kosa nijanona nahandro vary. Ary izao no hevi-dratsin'izy roa lahy ireo : Nanasa antsy ilay jiolahy hamonoany ilay mpamosavy mba hahazoany ny babo ho azy irery, rehefa maty io. Ilay mpamosavy kosa dia mba nihevitra izay tokony hahazoan' ireo babo ho azy samy irery, ka dia nasiany vorika ny varin' ilay jiolahy.
Samy tanteraka tokoa ny hevi-dratsin'izy roa lahy, fa norasain'ilay jiolahy tamin' ny antsy ilay mpamosavy ka maty. Ary nony avy hatreo kosa, dia nahatsiaro noana izy ka hihinana ny vary, dia maty nitsitra teo koa. Nony nahita izany reniny, dia niteny tamin' ny zanany vavy hoe : "Hitanao ary anaka, fa tanteraka tokoa ilay nolazaiko taminao hoe : Ny olo-marina tsy mba matimaty foana tsy akory." Dia lasan' izy mianaka avokoa ny fananana izay nangalarin' izy roa lahy, ka tonga mpanjatobe tampoka foana teo izy mianaka.